AirTags dia nohavaozina amin'ny rindrambaiko vaovao 1.0.276 | Avy amin'ny mac aho
Efa herinandro vitsivitsy izay no namoahan'ny Apple fanavaozana ny firmware ho an'ny AirTags betsaka ny mpampiasa tsy nahazo an'ioToa ilay kinova izay laharana 1A276d sy ny kinova 1.0.276 Ary ny olana sasany ary farany dia tsy tonga tany amin'ireo mpampiasa rehetra akory izany.
Amin'ity tranga ity ny kinova vaovao dia mitovy isa amin'ny teo aloha, izany hoe ny kinova firmware 1.0.276 noho izany dia ho sarotra ny hahafantatra raha efa nanavao taloha isika rehefa hanana ny kinova vaovao napetraka ao amin'ny AirTag.
Ireo fanatsarana tafiditra ao anatin'io kinova io dia mifandraika amin'ny maody very ary toa amin'ity tranga ity dia mitovy izy ireo ary mifandray amin'ity maody ity. Tsy fantatra ny antony tsy namoahan'ny Apple farany ilay kinova vaovao ho an'ny rehetra fa toa izao dia hahatratra an'izao tontolo izao.
Amin'ny ahy manokana dia azoko lazaina izany Izaho dia efa nametraka ny fanavaozana, tsy haiko raha avy amin'ny fotoana hafa na manomboka izao fa efa ao amin'ny 1.0.276 aho. Ny fiasa vaovao dia misy koa ny fanitsiana ny vanim-potoana izay alain'ny AirTags hilalaovana ny fampandrenesana henon'ny rehefa tafasaraka amin'ny tompony ankoatry ny fanatsarana ny fiainana manokana. Etsy ankilany, ny orinasa Cupertino dia nanamafy fa miasa amina rindranasa Android iray izay hahita ny AirTags sy ny kojakoja hafa azo ampiasaina amin'ny «Fikarohana».
Nohavaozina ve ny AirTag anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » AirTags dia nohavaozina amin'ny firmware vaovao 1.0.276